Maka: i-infographic exhumanayo | Martech Zone
Umaka: i-infographic esebenzayo
Umklami wethu ubesebenza kanzima, usanda kukhiqiza ividiyo egqwayizayo ye-Right On Interactive. Ngaphandle kobunzima bokugqwayiza, ukunikeza amanye amavidiyo kuthatha amahora ukusebenzisa amathuluzi wedeskithophu ajwayelekile. UMoovly (okwamanje uku-beta) unethemba lokukushintsha lokho, ukuhlinzeka ngengxenyekazi evumela noma ngubani ukuthi adale kalula amavidiyo opopayi, izikhangiso ze-banner, izethulo ezisebenzisanayo nokunye okuqukethwe okuphoqayo. I-Moovly iyithuluzi elilula online elikuvumela ukuthi udale okuqukethwe okugqwayizayo ngaphandle kokuthola
Sithanda i-Visual.ly ngokuthola nokwabelana nge-infographics. DK New Media ungumklami oqinisekisiwe ku-Visual.ly, enethoni ye-infographics enhle esesicwaninge, sakha futhi saphromotha kumakhasimende ethu. Kanye ne-static infographics, iqembu leVisual.ly liyaqhubeka nokwenza ngcono ama-infographics abo ashukumisayo futhi… hlola le infographic enhle yeGoogle Analytics edonsa izibalo zakho zamasonto onke zibe ngumklamo omuhle. Ungaletha ngisho ne-infographic yakho kuwe nge-imeyili